हलमा ‘आमा’ र ‘सेन्टी भाईरस’ « THULOPARDA.COM
यो साता दुई नेपाली चलचित्रहरु एकसाथ रिलीज भएका छन् । दिपेन्द्र के. खनाल निर्देशित ‘आमा’ र रामबाबु गुरुंग निर्देशित ‘सेन्टी भाईरस’ रिलीज भएका हुन् ।बिल्कुल फरक पृष्ठभुमिको कथामा बनेका यि दुबै चलचित्रलाई लिएर दर्शकमाझ उत्साह रहेको छ । शुक्रबार बिहानै देखी दुबै चलचित्रहरुले व्यापारको राम्रो संकेत देखाएका छन् ।
आमा र छोरीको भावनात्मक सम्बन्धको कथा भन्ने ‘आमा’मा मिथिला र सुरक्षाका अलावा सरिता गिरी, देशभक्त खनाललगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ । यो चलचित्रमा अभिनेत्री सुरक्षाले पिताको दाहसंस्कार गर्न कपाल खौरिएको दृश्यले दर्शकको मन जितेको छ । ‘पशुपति प्रसाद’ जस्तो व्यावसायिक र समीक्षात्मक रुपमा सफल चलचित्र दिएका दीपेन्द्र के. खनाल निर्देशित यो चलचित्रलाई दिपेन्द्रको नयाँ परिक्षाको रुपमा समेत लिइएको छ ।
समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा बनेको ‘सेन्टी भाइरस’मा धुर्मुस-सुन्तलीको परिचय बनाएका सिताराम कट्टेल र कुंजना घिमिरेको प्रमूख अभिनय छ । फरक पार्टीमा आबद्ध श्रीमान (सिताराम कट्टेल) र श्रीमती (कुञ्जना घिमिरे) बीचको नोकझोंक सहितको ट्रेलर रिलीज भएसँगै यो चलचित्रले उत्सुकता बढाएको थियो । चलचित्र ‘कबड्डी’ सिरिजका निर्देशक रामबाबु गुरुंगले केहि भिन्न परिवेशमा यो चलचित्र निर्देशन गरेका छन् ।